Dhibaatooyinka Dalxiiska & Soo kabashada Goobta: Buug Cusub oo ay tahay in la akhriyo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dhibaatooyinka Dalxiiska & Soo kabashada Goobta: Buug Cusub oo ay tahay in la akhriyo
Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Buug cusub oo ay waajib tahay in la akhriyo
Way habboon tahay in buug ka hadlaya dhammaan arrimaha xasaradaha iyo xaaladaha xunxun ee saamaynta ku leh dalxiiska lagu sii daayo Halloween. Si kastaba ha ahaatee, marka dalxiisku ka bilaabo ka soo kabashada COVID-19, tani waxay diiradda saartaa walxaha mataanaha ah ee khatarta, khatarta, iyo fursadaha.
Aniga oo ah qoraaga buuggani iguma habboona in aan wax xukun ah ka sameeyo tayada buuggan.
Xukunkaas wuxuu u gaar yahay akhristayaasha ama kuwa dhaleeceeya. Si kastaba ha ahaatee, waxaan wax yar kaaga sheegi karaa buuggan iyo sida uu ugu habboon yahay warshadaha safarka.
Nuxur ahaan, buugani waa mawduuc ka hadlaya qaybaha muhiimka ah ee khataraha iyo dhibaatooyinka kuwaas oo saameeya warshadaha dalxiiska.
Halkaa, waxaan ka hadlayaa xeeladaha ay adeegsadaan hay'adaha maaraynta goobta iyo ganacsiyada dalxiiska si ay uga hortagaan inay dhacaan ama ka jawaabaan iyaga marka ay ku dhuftaan.
Qaybaha qalalaasaha ee buuggu xusay waa:
Covid-19 Cutubka ugu dheer ee buugga
Deganaansho la’aan siyaasadeed
Masiibooyinka dabiiciga ah
Caafimaadka iyo dhibaatooyinka faafa, kahor COVID-19
Guuldarrooyinka Maamulka iyo Adeegga (Himilooyinka gaarka ah)
Khatarta deegaanka iyo dhibaatooyinka
Ganacsi kasta oo dalxiisku waxa uu la xidhiidhi karaa mid ka mid ah mawduucyadan, waxaana dhammaanteen wax badan ka baran karnaa sida goobaha dalxiiska iyo ganacsiyadu uga jawaabeen caqabadahan.
Marka laga soo tago mawduucyada kor ku xusan, labada cutub ee hordhaca ah waxay diiradda saarayaan qeexidda khatarta, dhibaatooyinka iyo adkeysiga iyo sidoo kale dawladda, ururada dalxiiska ee caalamiga ah iyo waaxda dalxiiska ee hababka dalxiiska ee khatarta dalxiiska, dhibaatooyinka iyo soo kabashada.
Mawduucyada waxaa lagu muujiyey in ka badan 20 daraasadood (2-4 cutub kasta) oo ka kala yimid adduunka oo dhan. Sida aan buugga u qoray buug ahaan waxa jira su'aalo doodeed dhammaadka cutub kasta. Intii ay ku jirtay ardayda jaamacadda waxaan ku dadaalay sidii aan u hubin lahaa inay si fudud u fahmi karaan dhammaan akhristayaasha iyo gaar ahaan xirfadlayaasha dalxiiska. Si kastaba ha ahaatee, wakhtiga jiifka wax akhrintu maaha. Waxaan doonayey in aan ka qaato aragti caalami ah iyo halka ay suurtagal tahay, oo aan ku daro qaar ka mid ah dhibaatooyinka iyo barnaamijyada soo kabashada ee aan si toos ah uga qaybqaatay.
Buuggani waa buuggii ugu horreeyay ee mawduuca ku saabsan khatarta dalxiiska, dhibaatada iyo soo kabashada tan iyo shaqadii Joan Henderson ee 2007, Dhibaatooyinka Dalxiiska, Sababaha, Cawaaqibta iyo Maareynta. Buuga Professor Henderson wuxuu ahaa mid cajiib ah oo igu dhiirigeliyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaan hubaa inay ku raaci doonto, wax badan ayaa ka dhacay dalxiiska ilaa 2007 iyo COVID-19, oo aan si weyn uga hadlay, waa dhibaatada iyo caqabada ugu weyn, xirfadlayaasha dalxiiska iyo barayaasha soo maray nolosheenna.
Faahfaahinta halkan ka arag. Buuga waxaa daabacay Sage Publishing (London) waxaana la heli doonaa caalamka oo dhan laga bilaabo Oktoobar 30 (taariikhda ku habboon ee la sii daayo Halloween). Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysato buugga laakiin ha ka xishoon inaad ii sheegto inaadan yeelin iyo sababta. Waxaan ka shaqaynayaa buug kale marka talada wax ku oolka ah mar walba waa la soo dhawaynayaa.